रुसलाई शीतकालीन ओलम्पिकमा प्रतिबन्ध- खेलकुद - कान्तिपुर समाचार
रुसलाई शीतकालीन ओलम्पिकमा प्रतिबन्ध
मंसिर २०, २०७४ एएफपी
लुसान — अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (आई‌ओसी)ले मंगलबार सन् २०१८ को शीतकालीन ओलम्पिकबाट रुसलाई प्रतिबन्ध लगाएको छ । सरकारबाट प्रायोजित डोपिङ कार्यक्रम चलाएको आरोपमा रुसमाथि यो प्रतिबन्ध लागेको हो । रुसमाथि यस कारवाहीका बावजुत दोष नलागेका खेलाडीले ओलम्पिक झन्डामुनि रहेर प्रतियोगितामा भाग लिन भने पाउने छन् ।
डोपिङ प्रकरणमा कुनै देशमाथि गरिएको यो नै अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठूलो कारवाही हो । दक्षिण कोरियाको पेङचाङमा हुन लागेको शीतकालीन ओलम्पिक सुरु हुन ६५ दिन अगाडि रुसमाथि यो कारवाही भएको हो । आईसीसी अध्यक्ष थोमस बाचले रुसमाथि ओलम्पिक भावनामा चोट पुर्‍याएको हुँदा यस्तो कारवाही गर्नु परेको दाबी गरे ।
वर्ल्ड एन्टी डोपिङ एजेन्सी (वाडा) र आईओसीको आफ्नै छानविनका क्रममा रुसले सरकारी प्रयोजनमै आफ्ना खेलाडीलाई प्रतिबन्धित औषधि प्रयोगका लागि कार्यक्रम चलाएको पाइएको थियो । सन् २०१४ मा सोचीमा भएको शीतकालीन ओलम्पिकका क्रममा रुसले डोपिङ कार्यक्रमलाई अझ अगाडि बढाएको थियो ।
प्रकाशित : मंसिर २०, २०७४ १०:४४
राष्ट्रसंघीय अधिकारी उत्तर कोरिया पुगे
मंसिर २०, २०७४ बीबीसी
वासिङ्टन/सोल — संयुक्त राष्ट्रसंघीय राजनीतिक मामिला प्रमुख जेफ्री फेल्टमेन चार दिने भ्रमणका क्रममा मंगलबार उत्तर कोरिया पुगेका छन् । उनको भ्रमण ६ वर्षयता राष्ट्रसंघीय उच्च अधिकारीले गरेको पहिलो हो ।
पूर्वअमेरिकी कूटनीतिज्ञ फेल्टमेन राष्ट्रसंघमा कार्यरत सबैभन्दा वरिष्ठ अमेरिकी कर्मचारी हुन् । उनी शुक्रबारसम्म उत्तर कोरियाली राजधानी प्योङयाङमा हुने बताइएको छ । दक्षिण कोरिया र अमेरिकाले उत्तर कोरिया लक्षित हालसम्मकै ठूलो हवाई अभ्यास गरिरहेका बेला उनी भ्रमणमा निस्किएका हुन् ।
राष्ट्रसंघीय प्रवक्ताका अनुसार फेल्टमेनले उत्तर कोरियाका विदेशमन्त्री री योङ होसहित अन्य उच्च वरिष्ठ अधिकारीसँग भेट्ने कार्यक्रम छ । उनीहरूबीच द्विपक्षीय स्वार्थ र चासोका मुद्दाबारे नीतिगत छलफल हुनेछ । तर फेल्टमेनले उत्तर कोरियाका नेता किम जोङ उनसँग भने भेट्ने कार्यक्रम तय भइसकेको छैन ।
गत साता उत्तर कोरियाले हालसम्मकै ‘सबैभन्दा शक्तिशाली’ अन्तरमहादेशीय ब्यालेस्टिक क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरेपछि यो भ्रमण हुन लागेको हो । प्योङयाङले उक्त क्षेप्यास्त्र अमेरिकाको जुनसुकै भूभागमा प्रहार गर्ने सक्ने दाबी गरेको छ । कोरियाली प्रायद्वीपमा देखिएको उच्च तनावका माझमा फेल्टमेनले भ्रमण सुरु गरेका हुन् । उत्तर कोरियाले राष्ट्रसंघलाई गत सेप्टेम्बरमा ‘नीतिगत संवाद’ का लागि आमन्त्रण गरेको थियो । राष्ट्रसंघले उक्त आमन्त्रणलाई प्योङयाङले पछिल्लो क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरेको भोलिपल्ट अर्थात् नोभेम्बर ३० मा स्वीकार गरेको हो ।
यसअघि फेल्टमेन सोमबार चीनको राजधानी पुगेका थिए । उत्तर कोरिया चीनको प्रमुख आर्थिक तथा कूटनीतिक साझेदार हो । चिनियाँ उच्च कूटनीतिक अधिकारी उत्तर कोरियासँग वार्ता गर्न गतमहिना प्योङयाङ पुगेका थिए ।
राष्ट्रसंघीय महासचिव एन्टोनियो गुटेरेजले उत्तर कोरियाली संकटबारे मध्यस्थता गरिदिने प्रस्ताव गरेका थिए । तर राष्ट्रसंघले भने उनले प्योङयाङ भ्रमण गर्ने कुनै कार्यक्रम नरहेको जनाएको छ ।
प्रकाशित : मंसिर २०, २०७४ १०:०६
महिला लिग आजदेखि
श्रीलंकाको नजरमा ह्वाइटवास
नेपालको सजिलो जित
महिला पत्रकारलाई फुटबल प्रशिक्षण
औसतमा एसियाड तयारी
क्रिकेट र पाराग्लाइडिङ थपिने
राजनीतिमा महिला किन कम ?
बिभूति भट्टराई श्रावण ७, २०७५
राजनीतिलाई सामाजिक चेतनाकै प्रतिविम्बका रूपमा बुझिन्छ । राजनीति राज्यको मूलनीति भए पनि सामाजिक चेतना र संस्कृति त्यसको जरो हो । नेपाली समाज सघन पितृसत्तात्मक चेतनाले परिचालित छ ।...
त्रिवि पुन:संरचनाको अवसर
प्रा. लालु पौडेल श्रावण ७, २०७५
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले यही साउन ५ गते ५९ औं वार्षिकोत्सव मनायो । कलेज स्थापना गर्न सहयोग गर्ने केही चन्दादाता सम्मानित भए । लामो समय सेवा गर्ने शिक्षक कर्मचारीले...
रमेश विश्वकर्मा श्रावण ७, २०७५
समाजमा छुवाछूत कहिलेदेखि थियो भन्ने सवालमा मतान्तर छ । यसबारे प्रभावकारी अनुसन्धान भएको देखिँदैन । गौतम बुद्धकालीन समयमा पनि जातीय विभेद रहेको पुष्टि हुन्छ । हिन्दु वर्णाश्रम व्यवस्था...
विश्वप्रकाश शर्मा श्रावण ७, २०७५
जुम्लाको अस्पतालमा गोली चलेको साँझ बुद्ध र जंगबहादुरको ‘फ्युजन’को अलि अघिको प्रसंग सम्झिएँ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले केही अघिमात्रै डा. गोविन्द केसीलाई राजनीतिमा आउन चुनौती दिएको...
जसले मान राख्छ, उसकै मर्दन
सम्पादकीय श्रावण ७, २०७५
एक जना निडर र सेवाभावका वरिष्ठ चिकित्सकले चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि शृंखलाबद्ध आमरण अनशन बस्नु राज्यका लागि लाजमर्दो विषय हुनुपर्ने हो । तर,...